लगातार घट्दो क्रममा नेप्से | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर लगातार घट्दो क्रममा नेप्से
मुख्य खबर, लगानी 87 views
फागुन ९, काठमाडौं (अस) । बुधवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ६९ प्रतिशत घटेको छ । काराबोर शुरु भएदेखि घटेको बजार अन्त्यमा ९ दशमलव ६४ अङ्क घटेर १ हजार ३ सय ८७ दशमलव शून्य ८ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । कारोबार भएका ९ समूहको परिसूचक घटेपछि नेप्से परिसूचक घट्न पुगेको हो । जसमध्ये जलविद्युत समूहको परिसूचक १ दशमलव शून्य ४ प्रतिशतले घटेको छ । बाँकी ८ समूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा कमले घटेको छ ।
दोस्रो त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक तथा देशमा नँया प्रधानमन्त्री चयन हुँदा पनि बजार बढ्न सकेको छैन । कुनै ठोस कारण नहुँदा पनि बजार लगातार घटिरहेको छ । ब्रोकर कम्पनीहरुको भनाईमा ब्याजदर वृद्धि हुनु, बजारमा एकै चोटी भारी मात्रामा सार्वजानिक निष्कासन, हकप्रद आउनु, स्थाई सरकार आएपनि कामको टुङ्गो नहुँनु जस्ता कारणले बजार घटेको हो ।
ओम डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेडको प्रतिकित्ता रू. २ सय २९ मा रू. ३ करोड ५४ लाख बराबरको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ । यस बैङ्कको ११ औं वार्षिक साधारणसभाले प्रस्ताव गरेको १७ दशमलव ६९ प्रतिशत बोनस शेयर प्राप्त गर्नको लागि बुक क्लोजको मिति नजिएकाले बैङ्कको कारोबार बढ्न पुगेको हो । कारोबार भएका १ सय ४५ कम्पनीको ३ हजार २ सय ८४ पटकको व्यापारमा ७ लाख १३ हजार ६ सय ४२ कित्ता शेयरको रू. २८ करोड ५५ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।